အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: အိမ်ဆိုတာ အဝေးမှာ
ကမ္ဘာမြေရယ် မေမေရယ်
ဖေဖေရယ် ..... မေမေရယ် ....
မနေ့ညက အိပ်မက်တွေ…. နောက်တစ်နေ့ နံနက်ခင်းမှာ ပြန်စဉ်းစားတော့ တစ်ချို့က ပြန်မှတ်မိသလို... တစ်ချို့က ပျောက်ဆုံးသွားလိုက်တာ.. အိပ်မက်ဟာ အိပ်မက် မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ…. ။
ဒီလိုပါပဲ.. ငယ်ဘ၀ ဆိုတာဟာ အိပ်မက် တစ်ခုလို….
ပြန်စဉ်းစားမိလိုက်တိုင်း အမှတ်တရတွေ တိုးလာတာတွေရှိသလို…. ကြိုးစားပြီး မေ့ပျောက်လိုက်လို့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တော့သလို ထားခဲ့လိုက်ရတာတွေ…… ကိုယ်တိုင်က မမေ့ပျောက်ချင်ပါဘဲနဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အတိတ်ရဲ့ အချိန်တွေ….. အိပ်မက်တွေ… အိပ်မက်တွေဟာ.. အခန်းငယ်.. အပိုင်းငယ်ပေါင်း များစွာ.. များစွာ…. များစွာရယ်ပါ…..။
တကယ်ပါပဲ….. ငယ်ဘ၀ဆိုတာ..`ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံ´ တစ်ခုဆိုတာဟာ ငယ်ဘ၀ကို လွန်ပြီးမှပဲ နားလည် လိုက်ရတာမျိုးလေ…. `အမေ့အိမ်´ ဆိုတာမျိုးကလည်း တကယ် ဝေးကွာပြီဆိုမှ ပိုတမ်းတ မိတတ်တာမျိုး ထင်ပါတယ်…. ရုပ်ဝတ္ထုတွေ တိုးတက်ပါတယ် ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကနေ ဟိုး…. အဝေး.. မြို့လေးဆီက `အမေ့အိမ်´ကို လွမ်းနေကြသူတွေ… အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ… တောက်လောင်နေတဲ့မီးတွေကို ဘယ်အရာကများ ငြိမ်းပေးနိုင်မှာလဲ….။
တစ်နေ့နေ့.. တစ်နေ့နေ့… တစ်နေ့နေ့တော့… ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပေမယ့်… ဒီစကားပြောပြီး… တစ်နေ့… တစ်နေ့… ဖြတ်သန်းလိုက်ရတာ.. နေ့တွေက.. မဆုံးနိုင်ဖူး… အကြိမ်ကြိမ်… သုညနား… သွားသွားကပ်နေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို…. ပြန်ပြန်ဆွဲတင်ရင်း… ပြက္ခဒိန်စာရွက်တွေကို ဆုပ်ဖြဲနေရတုန်းပဲ… ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ချမှတ်ထားတဲ့ limit တစ်ခုကို သိပေမယ့်.. ကိုယ်တိုင်က လိုက်နာဖို့ ခက်ခဲနေဆဲပဲ...။
ကြေကွဲနေမိတာ မဟုတ်ပေမယ့်… တစ်ခါ တစ်ခါတော့လည်း… ၀မ်းပန်းသနည်း… အူလှိုက်သည်းလှိုက်… ငိုချလိုက်ချင်ပါရဲ့…..။
ဒီလိုပဲ… တစ်နေ့နေ့… တစ်နေ့နေ့… ဆိုတဲ့အသိနဲ့… မျှော်လင့်ရင်း… ရွက်လွင့်ရဦးမယ်….။
ဒီလိုပဲ… တစ်နေ့နေ့.. တစ်နေ့နေ့.. ပြန်လာမယ်…… ဆိုတာသိရက်နဲ့.. ဟိုးအဝေး အိမ်လေးတွေဆီကနေ… သူတို့…… နေ့တိုင်း….. မျှော်နေကြဦးမယ်လေ…။